Tiro intee le’eg ayaa sharci darro ugu dhuumaaleeysanaysa Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay tisdag 16 maj 2017 kl 16.25
Afar sanno dabadood ayaa mar kale dib deggenaansho loo dalban karaa
Kaniisadda Sweden oo taageero u fidineeysa qaxooti dhuumaaleeysi ku sugan. sawir: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT
Waa xaalad aad u adag isidii lagu ogaan lahaa, waxayna ku xiran tahay habka loo tiryo. War-bixinta ay idaacaddu ka soo diyaarisay ayaa looga hadleyaa dadyoowga diidmada ku heley dalabkoodii magan-gelyo doon, hase yeeshee ka door bidey iney Sweden si sharci-darro ah ugu nagaadaan. Waa tiradii ugu dambeeysay ee Wakaaladda socdaalka midda laga hadleyo.
Kolka ay ka soo wareegto muddo afar sannadood gaarsii-san diidmada dalabka magan-gelyo doonka ayuu shakhsigu sida uu xeerku dhigeyo xaq u leeyahay inuu dib mar kale magan-gelyo u dalban karo. Kolkaasina oo uu faylkiisu uu ka baxo tira-koobka hayadda socdaalka.
Illaa iyo bishii maarso ee sannadkan 2017 waxay hayadda socdaalku baafin ku sameeysay iney dalka ku dhuumaaleey-saneyaan 12 591 ruux. Tira-koobka saadaalinta ee hayadda socdaalka ee sannadka 2018 ayaa ah 16 100, waana tiro ay adag tahay in la qiyaaso, sida uu sheegay madaxa ciidanka xuduudaha Patrik Engström oo u warramayay Sveriges Radio. Tiradaa ayaa qaarkood laga yaabaa iney u socdaaleen dalal kale, halka ey dhanka kale jiraan tiro aad badan ee la og-sooneyn, tusaale ahaan dadyoow aan iyagu magan-gelyo ka dalban wakaaladda socdaalka, hase yeeshee dalka ku sugan.
Isha: Hayadda maamulka iskuullada, hayadda dhabba-tuska caafimaadka 1177, xafiiska dawladdat, wakaaladda socdaalka, ciidanka ammaanka.